Dowladda Sweden oo soo dhaweeysay heshiiskii dowladda & Midowga Musharixinta | Allbalcad Online
Home WARARKA Dowladda Sweden oo soo dhaweeysay heshiiskii dowladda & Midowga Musharixinta
Dowladda Sweden oo kamid ah dowladaha taageeraada siiya Soomaaliya ayaa soo dhaweysay hehsiiskii habeen ka hor Magaalada Muqdisho ku dhex-maray Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya & Midowga Musharixiinta.
Wasiirka Iskaashiga Caalamiga Sweden Per Olsson Fridh ayaa ugu baaqay hoggaamiyeyaasha Somaalida inay ka heshiiyaan arrimaha la isku haayo ee doorashooyinka.
Mudane Per Olsson Fridh oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Twitter-ka ayaa sigaar ah baaq ugu diray Ra’iisul Wasaaraha xilka siihaya oo heysta dhalashada dalka Sweden , isaga oo sheegay inay muhiim tahay sii wadista wada xaajoodyada.
“Sweden waxay soo dhaweynaysaa heshiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, Golaha Midowga musharixiinta madaxweynaha iyo hogaamiyaasha Hirshabelle Banaadir iyo Galmudug. Waxay ku bogaadineysaadhinacyada oo dhan tallaabadan ku aaddan xuquuqda dastuuriga ah, badbaadada muwaaddiniinta & sii wadista wadahadallada siyaasadeed si loo xaqiijiyo doorashooyinka nabdoon,” ayuu Mudane Per Olsson Fridh .
Heshiiska Xukuumadda Soomaaliya & Midowga Musharixinta ayaa waxaa horay u soo dhaweeyay Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Maxamed cabdullaahi farmaajo, Maamulada Puntlnad & Jubbaland iyo Qaramada Midoobay.
Previous articleCiidamada Dowladda & kuwa AMISOM oo howlgal kula wareegay Saldhigyo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab
Next articleBangiga dhexe ee Soomaaliya oo markii ugu horraysay bixiyey Ruqsadda Adeegga Lacagaha Taleefanka